आइतबारको राशीफल : आज लगानी र धनआर्जनको लागि तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
आइतबारको राशीफल : आज लगानी र धनआर्जनको लागि तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस्
वि.सं. २०७६ भाद्र २२ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०८ तारिख । भाद्रपद शुक्ल (ञलाथ्व) दशमी, मूल नक्षत्र, धनु राशिको चन्द्रमा, आयुष्मान् योग, तैतिल र गर करण । आजको चाडपर्व र उत्सव : निजामती सेवा दिवस, शिक्षा तथा साक्षरता दिवस ।
मेष राशी हुनेहरुको लागि आज दिनको सुरुवातमा सकारात्मक देखिन्छ तर भरै साँझबाट भने केही दिनका लागि प्रत्येक काममा बाधा अड्चन आउनेछ । किचलो र विवाद हुने सम्भावना छ । मानसिक तनाव बढ्नेछ । धैर्यता र संयमता अपनाउन सके राम्रो हुन्छ ।
आफूले भनेको कुराले विपरित अर्थ प्रदान गर्नेछ । मित्र वा नातेदारबाट अपमानि हुनुपर्ला । प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य समेत सबल छैन ।
वृष राशी हुनेहरुको लागि आज मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्ति हुनसक्छ । विनियोजन र लगानीले फाइदा दिलाउनेछ । घरायासी सुखसुविधाको कुनै महंगो वस्तुको किनमेल गर्न मन लाग्नेछ । आर्थिक समस्या समाधानको उपाय पत्ता लाग्नेछ ।
व्यवहारिक र व्यवसायिक चिन्तनका लागि समय राम्रो छ । घरायासी सुखसुविधा र मायाप्रमेमका लागि समय निकाल्नु पर्नेछ ।
मिथुन हुनेहरुको लागि आज भाइबहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट खुशीको खबर प्राप्त हुनेछ । आत्मब बढ्नेछ । ठूलाबडाले सहयोग गर्नेछन् । व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेको छ । तर साँझदेखि प्रतिकुल समय छ । आर्थिक समस्याले संकट उत्पन्न गर्नेछ ।
खर्च बढ्न सक्छ । रिसको कारणले असर पुर्याउने सम्भावना छ । आत्मबल र संयमता अपनाउनुहोला ।
यस राशी हुनेहरुको आज अपरान्हपछि तनाव र निराशाबाट मुक्त हुने भए पनि दिनको सुरुवातमा मान्यजनसँग समझदारी बढ्न सक्छ । सानातिना घरायासी काममा समय बित्नेछ । सम्पत्तिको विवादको विषयमा छलफल हुनेछ ।
छिमेकीको व्यवहारले निराश तुल्याउनेछ । प्रतिस्पर्धामा फाइदा हुदैन । यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रमा सामान्य लाभ हुनेछ । साँझपख भने दार्शनिक र बौद्धिक क्षेत्रमा मन जानेछ ।
यस राशी हुनेहरुको आज पराक्रमले प्रसिद्धी कमाउने दिन छ । यात्राको सम्भावना छ । वैदेशिक व्यापार, कृषि व्यवसाय र नोकरी गर्नेहरुले आज मानसम्मान र ख्याति कमाउन सक्छन् ।
परोपकारी र सामाजिक काममा मन जानेछ । कुनै कामको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । बेलुकी भने सानातिना घरायासी समस्याहरु देखापर्न सक्छन् ।
कन्या राशी हुनेहरुका लागि आज मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । वित्तीय पक्ष राम्रो छ । आलोचकहरु बढ्नेछन् त्यसकारण सचेत हुनुहोला । आलोचकहरु बढ्नेछन्, सचेत हुनुहोला । परिश्रम गर्दा पनि सोचेजस्तो लाभ नपाउँदा दिक्क लाग्नेछ वैदेशिक कामकाबाट भनेजस्तो फाइदा लिन सकिन्छ ।
रोकिएका सानातिना काम भने बन्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढे पनि खर्च गर्न मन हौसिनेछ । पारिवारिक झमेलामा समय बित्नेछ । अभिभावकको इच्छा पूरा गर्न सकिन्छ ।
तुला राशी हुनेहरुका लागि आज प्रतिष्ठित काम गर्ने समय छ । आत्मविश्वास बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ । मनपर्ने वस्त्र, अलंकार आदि उपाहार पाइने योग छ ।
व्यापार व्यवसायमा फाइदा छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ । कृषि वा कृषिजन्य व्यवसायमा लाग्नेहरुले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिनेछन् । महत्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ ।
वृश्चिक राशी हुनेहरुको लागि आज साँझसम्म विभिन्न समस्याले सताउनेछ । त्यसपछि शरिरमा उत्साह आउनेछ । शुभफल प्राप्तिका लागि मन आकर्षित हुनेछ ।
साँझपख विलासिता र रमाइलोका लागि मन आकर्षित हुनेछ । व्यापार व्यवसाय कमजोर नै रहेको छ । यात्राबाट पर्याप्त लाभ हुन सक्दैन । नयाँ व्यापार र व्यवसायतर्फ हात हाल्नु राम्रो समय छैन ।
धनु राशी हुनेहरुका लागि आज बौद्धिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । साथीभाइ र इष्टमित्रको सल्लाहले फाइदा दिलाउनेछ । विश्वासको वातावण बन्नेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ ।
रमाइलो पारिवापरिक जमघट हुनेछ । कर्मप्रति लगनशील भइनेछ । दैनिक कामको चाप बढ्नेछ । साँझमा भने निराश हुनुपर्ला ।
मकर राशी हुनेहरुका लागि आज धार्मिक भावनामा विकर्षण हुनाले कर्मनाश हुनसक्छ सचेत हुनुहोला । बादविवाद र झगडाबाट सचेत हुनुहोला । चिन्तनमूलक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । कडा मेहनत र परिश्रमपछि सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । बोलीबचन र काम गर्ने गराउने प्रक्रियामा विनम्रता देखाउनु आवश्यक छ ।
आफ्नै प्रतिज्ञा पूरा गर्न दौडधूप गर्नुपर्नेछ । आज मान्यजनको चाहनालाई वेवास्ता गर्नुहुँदैन । जोखिम हुने काममा हात नहाल्नु नै राम्रो हुन्छ ।
यस राशी हुनेहरुको लागि आज परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ । जनहीतको लागि धनको उपयोग हुनेछ ।
बौद्धिक प्रयास सफल हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो देखिन्छ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । ब्यापार व्यवासाय र कामधन्दामा खट्नुपर्ने समय छ । लामोदुरीको यात्राको लागि समय अनुकुल छ । दिनभरी लाभदायी समय छ । बेलुकी गर्नैपर्ने काममा मेहनत गरिनेछ ।
यस राशीका हुनेहरुका लागि आज दिर्घकालिक काम बेलुकीपख गर्नु राम्रो हुनेछ । आजबाट नकारात्मक समयको अन्त्य हुनेछ । तर दिनभरी भने प्रत्येक काममा बाधा आउने र ढिलोगरी सम्पन्न हुनेछ । लेनदेनमा विवाद आउन सक्छ ।
आर्थिक रुपमा नोक्सानी हुन सक्छ । व्यापार व्यवसायमा उतारचढाव आइलाग्नेछ । बिहानै घाटा बेहोर्नुपरे पनि साँझ भने सामान्य रहेको छ । आजबाट मनमा शंका, चिन्ता र छट्पटी समाप्त हुनेछ । आजि धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल हात लाग्नेछ ।